Banyere Anyị - Shandong New Ankai-Kitco Co., Ltd
Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Ngwá Ọrụ Co., Ltd. bụ a mba elu-tech enterprise ọkachamara mmepụta nke CNC igwe ngwaọrụ. Na nkà ihe ọmụma nke "Ndị mmadụ na-agba mbọ, na ụzụ Innovation", ụlọ ọrụ ọnwụ sọ dịghị mgbalị ike "elu-ọsọ, elu-nkenke, elu-pụrụ ịdabere" CNC akụrụngwa na proprietary ikike arịa amamihe site n'onye ahụ nke ukwuu na aku na uba ike, ike oru talent ike na elu azụmahịa na nkà ihe ọmụma.
Site afọ nke mgbalị, ụlọ ọrụ ọma mepụtara obere CNC nkenke akpaka mmanya lathe (akpọkarị nkenke akpaka lathe) nke a na-ekewa AK series, SM series, SX usoro na SC series, nwere a n'aka-na nkume igwe nri Nchikota ọrụ ma karịsịa na ọdabara maka nnukwu-ogbe multi-dịgasị iche iche elu-nkenke machining aga-eme nke gịrịgịrị-aro na obere mgbagwoju anya n'usoro akụkụ. Anyị na ngwaahịa nwere elu kpọmkwem retaining ike, na isi adịkwa akụkụ n'ịkpa mba a ma ama ụdị, dị ka nke ọma dị ka mmepụta Filiks na teknụzụ na-ebute ụzọ China. The machined ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe etinyere okwu, ọgwụ na ahụ ike ígwè, na friji, ngwa anya ngwá, home ngwa, aerospace, ụgbọala, na ọgba tum tum, ngwá electronic, Motors, timepiece ụlọ ọrụ na ndị ọzọ ọrụ.
Ebe ọ bụ na ya inception, Shandong New Ankai-Kitco Sowin CNC Machine Ngwá Ọrụ Co., Ltd. e dabere na nyocha, mmepe na mmepụta nke elu-ọgwụgwụ CNC lathes. Na azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "Ịnọgide Improvement, Ahịa Supreme", ụlọ ọrụ na-ewepụtara na-aghọ a ụwa na-eduga na ngwa emeputa na-eweta ọrụ.